खतरामा भगवान् !-Setoghar
आइतवार, मंसिर ३, २०७४
खतरामा भगवान् !
काठमाडौं । हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र बनेको जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरमा मंसिर ११ गते भएको मूर्ति चोरी घटनाको प्रहरी अनुसन्धान जारी छ । काठमाडौंबाट केन्द्रीय अनुन्धान ब्युरोको टोली अनुसन्धानका लागि घटनास्थलमा छ, आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
गृह मन्त्रालयको घटनाका सम्बन्धमा चासोमात्र देखाएको छैन, प्रहरीलाई जतिसक्दो चाँडो घटनाको याथार्थ सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहेको छ । तालुकदार निकाय संस्कृति मन्त्रालय र पुरातत्व विभागले घटनाको सम्बन्धमा चाँसो देखाइरहेका छन् । जुम्लबासी सडकमै ओर्लिएर चोरिएका मूर्ति खोज्न दबाब दिइरहेका छन् ।
जुम्लाको घटनाअघि डोल्पाको साल्दाङमा रहेको शे गुम्बाबाट ५ थान प्राचिन बहुमूल्य मुर्ति चोरिएका थिए । उपल्लो डोल्पाली तथा डोल्पा आउने पर्यटकको गन्तव्यस्थल शे गुम्बामा भएको चोरी अनुसन्धानमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । डोल्पाका प्राचीन गुम्बा र मन्दिरबाट दुई वर्षयता ३३ थान मूर्ति चोरी भएको तथ्यांक स्थानीय प्रशासनसँग छ ।
हुम्लाको बरगाउँमा रहेको तारकाखोर गुम्बामा २०६८ असोज १४ मा एउटा समूहले डकैतीगरी बहुमूल्य मूर्ती लगेको थियो । राति साढे १० बजे सातजनाको समूहले हातहतियार देखाएर सांगे मेन्ल्हा मूर्ति चोरी फरार रहेकोमा २०६९ जेठ ७ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले घटनामा संलग्न कालु लामा भन्ने नरेन्द्र लामासहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको थिाये यस्तै ललितपुरको पाटन चक्रवहिलमा रहेको देवदत्त विहारबाट २ सय वर्ष पुराना दुई मूर्ति चोरी भएका थिए । दुई महिनापछि चोर र मूति दुवै प्रहरीले फेला पारेको थियो ।
प्रहरीको तथ्यांक र घटनाक्रमले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका बहुमूल्य, पुरातात्विक र प्राचीन मूर्ति, शिलालेख तथा स्मारक खतरामा रहेको संकेत देखिए पनि खतरा कसबाट ? प्रहरी स्वयं अलमलमा छ ।
रौतहटमा शक्तिशाली बम विष्फोट, ११ घाइते
मंसिर १० गते पहिलो चरणमा हुने चुनावका लागि सुरक्षा तयारी पूरा : गृह मन्त्रालय
जीवन्त संग्रहालय हनुमानढोका दरबार क्षेत्र
मिस वर्ल्डमा मिस नेपाल नीकिताको स्थान टप ४० सम्म मात्रै
पृथ्वीजस्तै आकार र तापक्रम मिल्ने ग्रह भेटियो, एलियन जीवन रहेको विश्वास